Qalad qaldan, Bentley V8i - Gofumed
Maarso, 2010 Microstation-Bentley
Waxaan horeyba u soo qaatay Xulashada 1 Xidhmadda PowerMap V8i (8.11.05.19) kaas oo keenaya wararka xiisaha leh.
PowerMap, sida PowerDraft iyo PowerCivil ma qaadan liisanka Microstation, laakiin waxaa la mid ah sida Runtime at heerka si caddaalad ah u hooseeya marka la barbar dhigo Bentley Map + Microstation. Sidaas waxa uu ku egyahay sida codsi horumariyo baxo uuna by on Microstation API ah, iyadoo dhammaan sifooyinka laga reebo in this ma baxsan doono barnaamij kale sida Geopak Bentley, Descartes, iwm
Waxaa ka mid ah ugu xiisaha badan waa isbeddel ku sameeyey Browser ah, kaas oo u muuqdo sida bandhigay tabular caadiga ah, laakiin in ka badan in, maxaa yeelay, aad edit karaa sifooyinka xannibi (tafatirka Roobka), badbaadin baaritaan oo kale Miquis. Waxa kale oo ay u muuqataa mid xiiso leh, inkasta oo aan weli la cadeeyo kale inuu ku meeleeyo sifooyinka in shay oo aan haysan si ay u dhisaan (Kor Habka feature).
Munaasabadaha kale waxaa lagu xusay:
Union of miisaska (ku biir), oo ay ku jiraan qaababka xml ee dgn
Isku-xayiree / isku-dubbarid tiro badan oo leh xulasho si ay u dhaxlaan xogta
Warbixinta falanqaynta falanqaynta. Hadda, natiijooyinka lakin ama xulasho by sifooyinka waxaa loo diri karaa warbixin ah oo lagu soo bandhigay Data Browser.
Calaamadaynta, oo ku saleysan habka wax lagu qoro.
Isku-beddelka calaamadaha firfircoon ee ku saabsan qoraallada joogtada ah.
Waxyaabahan oo dhan waa kuwo gaboobay barnaamijyada kale ee GIS, laakiin si wanaagsan, waan soo dhaweyneynaa.
Cilladaydii baa i muuqatay,
Ka reebban: Faylka 'C: \_ WINDOWS \_ Cursors \_ hcross.cur' lama helin.
In mudo ah ayaan ka fikiray waxaan lahaa ma si loo soo dajiyo shuruudo ah, sida mar hore lagu rakibay Microstation V8i, laakiin ha arkaan in kaliya XML Parser 6 1 Service Pack iyo DirectX 9c updated. Sidaas daraaddeed waxaan dhammaan fikirka waa nooc ka mid ah dulqabo oo aan lagu rakibay on my Windows.
Si aad u xalliso tan, u gudbi faylka C: \_ WINDOWS \_ Cursors \_ / nuqul ka mid ah curyaamyada iskutallaabta ah, dib u soo celi sida hcross.cur
Ready sabab this gataan barnaamijka dayn maayo ii dhaqaajiso aragtida. doonaa inaan ciyaaro, si ay u arkaan haddii aan hoos u astrality heerka a tallaabo tutorial wanaagsan talaabo mashruuca la qabsashada waddanka la Urban Planning Cadastre maalmood jartey iga soo bixiyaa.
Halkaan ayaan kuu sheegayaa, maxaa yeelay waxaa dhici karta in aan dib u soo celin doono qalabkii dhacay loo sameeyay XFM ee 2005, laakiin isticmaalka guud.
Post Previous«Previous Bentley Map, waxaan rajeynayaa inaan wada jirno
Post Next Perquisites aan koorsada of ArcGISNext »